SHIRKADA SHANGHAI OO AH DHULKA VOLVO DHISMAHA DHISMAHA AYAA SI LAYAAB LEH UGU LUULAY QALABKA 40,000TH
Bishii Diseembar 23, 2020, cutubka 40,000th ee ay soo saartay shirkadda Volvo Construction Equipment ee warshaddii Shanghai ayaa si rasmi ah xarigga uga jartay xarigga isku imaatinka, taasoo calaamad u ah guul kale oo loo qabtay qalabka dhismaha Volvo ee Shiinaha muddo 18 sano ah. Kooxda maaraynta Volvo CE ee Shiinaha, wakiillada shaqaalaha iyo ...
BARNAAMIJKA WAYN EE TIEJIA SI AAD UGU ARAGTID CASHARKA UGU HOREEYA EE MAGAALADA ISTICMAALAYAASHA
Sanadihii la soo dhaafay, wax soo saarka qodista Shiinaha ayaa soo martay koror xoog leh, dagaalka loogu jiro saamiga suuqa ayaa durba bilaabay. Sida laga soo xigtay xogta iibinta qodista ee Shirkadda Dhismaha Mashiinka Dhismaha ee Shiinaha, saamiga suuq-geynta suuq-geynta gudaha ee 2019 wuxuu ahaa mid aad u sarreeya ...
Bishii Diseembar 10-keedii, Li Qianjin, maareeyaha guud ee shirkadda XCMG ee Nabadgalyada Dabka, heshiiska iskaashiga ee Xuzhou. Taas macnaheedu waa ...
MADAXWEYNE SU ZIMENG OO SOO DHIIBAY FARIIN SANO CUSUB 2021
Hal yuan ayaa soo noqotay Vientiane waa la cusbooneysiiyay. Munaasabaddan sagootinta duugga ah iyo soo dhaweynta cusub, waxaan jeclaan lahaa inaan wakiil ka noqdo Ururka Warshadaha Mashiinka Dhismaha ee Shiinaha hoggaamiyeyaasha iyo shaqaalaha heerarkooda oo dhan ee ku dagaallamaya mashiinnada dhismaha, iyo ...